Gaazexeessituu Faasikaa Taaddasa: ''Sagaleen gad-lakkifame kan isaanii akka ta'e nan tilmaama'' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Fasika Tadesse/FB
Goodayyaa suuraa Gaazexeessituu Faasikaa Taaddasan gaafa ajjechaan raawwate B/J Asaamminaw dubbistee turte
Guyyoota muraasa dura ajjeechaan qondaaltota mootummaafi waraana Itoophiyaa irratti raawwate Itoophiyaa dubbii ijoo addunyaa taasisee ture.
Ajjeechaa mootummaan wanti raawwate fonqolcha mootummaati jedhe kanaan qondaaltonni mootummaafi waraanaa shan ajjeefamaniiru.
Ajjeechaa kanaan kan shakkaman Birgaader Janaraal Asaamminaw Tsiggee osoo bajaajiidhaan miliqani ajjeefamuunis dhagahame ture.
Televijiiniin Naannoo Amaaraa illee sagalee isaanii miidiyaa naannichatti bilbiluun ergaan akka darbu gaafatan ummataaf gadhiiseera.
'B/J Asaamminaw Tsiggee baajaajin miliquuf yeroo yaalan ajjeefaman'
Ajjeechaa booda akeekkachiisa MM Abiy Ahimad
Gaafuma ajjeechaan raawwate galgala garuu gaazexessituun gaazexaa 'Addis Fortune' jedhamuuf hojjettu hogganaa nageenya Naannoo Amaaraa fonqolcha kana yaalaniiru jedhaman dubbisuu ishee dubbatti.
Turtii isheen BBC waliin taasiste akka armaan gadi dhihaata.
Battala oduun 'yaalii fonqolcha mootummaa' miidiyaa biyyaalessaa irratti himametti gaazexaa bulee gaafa Dilbataa bahuuf hoggantoota naannichaa kaan bira bilbiluun argachuu akka hin dandeenye yeroo hubattu qondaala nageenyaa naannichaatti bilbiluu ishee dubbatti gaazexeessituun kun.
Yeroos yaalii kana duuba eenyu akka jiru wanti himame hin turre.
Ergasii B/J Asaaminaw bira bilbiltee?
Eeyyee. Kanaan duras dhimma tokkof isaan dubbise waan turef bilbila isaanii nan qaba ture.
Bilbila isaanii dafani kaasanii?
Yeroosuma. Si'a lama qofa waame natti fakkaata.
Yeroo sanatti shakkamaa akka ta'an beektaa?
Homaa wanti beeku hin jiru.
Maal waliin jettan?
Bilbile jennaan kaasani. Ofan beeksise. Finfinneedhaa akkan bilbile, dhaabbata kamif akkan hojjedhuufi maaliif akkan bilbile itti hime.
Wanti naannichatti ta'aa jiru maal akka ta'e akka natti himan gaafadhe.
Magaalaa Baahirdaar keessa walitti bu'iinsi akka jiruufi miidhaanis akka dhaqqabe natti himani.
Pirees Sekireetariin Waajjira Ministira Muummee Obbo Nigusuu Xilaahun fonqolcha mootummaati jedhani ibsa kennan isin garuu walitti bu'iinsa naan jechaa jirtu yeroon jedhuun ''wanti fonqolcha mootummaa jedhamu hin jiru" naan jedhan.
"Fonqolchi mootummaa mandara keessatti hin taasifamu. Fonqolchi mootummaa kan taasifamu danda'u mootummaa giddugaleessaa irrattidha."
"Kuni dhugaa irraa kan fagaatedha. Tarii, mootummaan federaalaa naannicha seenuuf jedhee sababa kenne ta'uu danda'a jedheen tilmaama,'' naan jedhan.
Erga fonqolcha mootummaa hin taane wanti tahe maalire jedhe gaafannaan ''Amma isa dubbachuu hin danda'u. Sababni isaas nuti qorannaa irra jirra. Adda baasaa jirra. Akkuma raawwanneen isin beeksisna'' naan jedhan.
Yoom beeksistu jennaan ''Hamma tokko boru ganama qorannoo waan xumurruuf ibsa kennina,'' naan jedhan.
Turtii isaan waliin qabu xumuruuko dura gaaffii xumuraa jedhe ''Dhukaasni jira jedhama. Ammallee hin tasgabboofnemoo?'' jennaan ''Anattis darbe darbe dhukaasni natti dhagahama'' naan jedhan.
''Raayyaan Ittisaa seeneera isa jedhamu irrattiwoo?'' jennaan ''Isa irratti yaada kennu hin danda'u. Wanti beeku hin jiru,'' naan jedhan.
Ergasii gaaffii deebisuuf fedhii hin qabani turani. Wanti naan jechaa turan ''Qorannoorra jirra. Adda baasaa jirra. Hin xumurre. Akkuma xumurreen boru ganama ibsa ni kennina,'' deebii jedhu naaf deebisan.
Namni dubbiste isaan ta'u isaanii hangam mirkaneeffatte?
Sagalee isaanii nan beeka.
Akkamiin kana jette?
Kanaan dura dhimma nageenya naannichaa irratti isaan dubbiseen ture. Sagale isaanii sirriitti nan beeka. Bilbillis kan isaaniiti.
Yeroo isaaniif bilbilte sagaleen isaanii nama jeeqame fakkaataa? Sagaleen dhukaasaawoo ni dhagahama turee?
Bakka callisa qabudha. Bakka sagaleen jeequ hin turre, dhukaasnis bakka hin turre turani. Sagaleen isaaniis baay'ee tasgabbaa'aa ture. Yeroo na dubbisanis tasgabbaa'ani turani.
Wanta dhageenye irraa tasgabbaa'un [isaan irraa]waan eegamu miti. Akkamin sagalee tasgabbaa'e qabaatani sitti fakkaata? Tilmaamnikee maali?
Nama waraanaati mitiire? Yeroo baay'ee sagalee namoota kanasrraa miira isaanii waan hubachuu dandeenyu natti hin fakkaatu.
Wanti jedhame yoo ta'ee jiraate tarii naasuu irraa hubachuu kanin dhabeef nama waraanaa waan ta'anifi jedhee nan tilmaama. Garuu afaan guutee dubbachuu hin danda'u.
Turtiin waliin taasiste daqiiqaa meeqa ture?
Daqiiqaa sadiifi sekondii 18 dha.
Sa'aatii meeqatti bilbilteef?
2:29 [galgala] irratti ture.
Dubbii isaanii goolabuuf yaalu turanii?
Eeyyee akkana turani. Gaaffii erga deebisanii booda qorannaa taasisaa jirra. Irra deddeebi'ani gaafa xumurre qofa kan dubbachuu dandeenyu jedhu turan.
Miidhaa dhaqqabe yeroon gaafadhu bulchiinsa naannoofi waajjira dhaaba naannicha bulchuu irratti akka dhaqqabe naaf deebisani turani.
Yaalii fonqolcha Naannoo Amaaraa: Tamsaasa kallattii
Ajjeechaa raawwate irratti yaada paartii 'ABIN'
Ajjeechaa raawwate ija waraanaan: B/J Hayiluu Gonfaa
•Ajjeechaa raawwate ija siyaasaan: Obbo Leencoo Lataa
Maqaa dhahani kan dubbatan hin qabanii?
Oduu hojjennee waan turref maqaa Dr Ambaachaw dhahe isaan irratti miidhaan dhaqqabeeraa yeroon jedhu ''Gahus gahuu dhabus mala. Afaan guutee dubbachuu hin danda'u. Isa kan dubbachuu dandeenyu qorannoon keenya gaafa xumuramedha,'' naan jedhani turan.
Kanaan dura sagalee isaaniiti jedhame kan bahe ture. Namoonni gaaffii irratti kaasan turani. Akkamin si amanuun danda'ama? Sagalee isaanii eessatti waraabde?
Bilbila koo irratti 'recorder' nan qaba. Gaaffiifi deebii yeroon taasisu nan waraaba. Bilbila dhuunfaa hin waraabu.
Hojiif yeroo baay'ee bilbila biiroo fayyadamna. Gaafas bilbila biiroo fayyadamuf yaadeen ture.
Haa ta'u malee, hojjettonni kaanis waan raawwate adda baasaa waan turanif ture bilbilakoo kanin fayyadame.
Dhihoo turtii bilbilaan Hogganaan Dhaabbata Miidiyaa Naannoo Amaaraa B/J Asaamminaw Tsiggee waliin taasisan gadhiifameera. Sagalee sana namoonni gaaffii irratti kaasan jiru. Ati isaaniin sagaleedhaan adda baasuu nan danda'a waan jettef waa'ee sagalee kanaa maal jetta?
Sagalee isaanii ta'u akka danda'u nan tilmaama. Akkuman siin jedhe sagalee isaanii dhagahee nan beeka.
Irra deddeebi'e waanan dhagaheef addan baasa. Sagalee isaanii natti fakkaata. Sagaleen isaanii sirriidha. Lakkii sirrii miti, hojjetameeti isa jedhu irratti yaada osoo kennuu baadhee natti tola.
Erga isaan dubbiste yeroo hangamii booda Fesbuukii irratti kan barreessite?
Gaazexaa Dilbata bahu erga gara mana maxxansaatti ergine booda kanin barreesse. Sa'aatii tokko ni taha.
Fesbuukii irratti yeroo barreessitu shakkamaa ta'u isaanii beekta turtee?
Tasa hin beeku. Erga barreessee booda gara Adaamaa oofaan ture. Gidduutti bilbilli hedduu bilbilama ture.
Bakkan deeme gaafan gahu halkanaa'eera. Intarneetiin adda cite waan turef waanin dhagahe hin qabu.
Akka tasaa bakki dhaqe ibsaan hin turre. Buleeti ture televijiniin naannoo Amaaraa isaan shakkamaa akka ta'an namoonni dhagahan kan natti himani.
Waa'ee waan raawwate wanti ifa hin taane turan. Erga isaan dubbiste booda keessumaa dhaabbata basaasaa biyyattii irraa namni si dubbise jiraa?
Lakki. Ergasii booda qaamni na dubbise na gaafates hin jiru.
Miidiyaa hawaasummaa irratti ukkaamfamte fudhatamteetti, isa dura ammoo namoota hin beekamneen ajjeefamte gatamteetti oduun jedhu dhagahama ture.
Garuu akka odeeffamu wanti narra gahes ta'e kan na gaafates kan na ukkaamsee na butes hin jiru.
Gaaffiifi deebii kana akka kennitu, homaa wanti narra gahe hin jiru akka jettu dhiibbaan mootummaa irraa sitti dhufe jiraa?
Isa dura, guyyoota muraasa boodas dhiibbaan narra gahe hin jiru. Dhimma kana irratti namni na waamee, na dubbiseefi na gaafates hin jiru.
Kallattiidhaanis ta'e kallattiin ala waa'ee kanaa odeeffannoo dabalataa argachuuf namoonni yaalan hin turree? Namoota humna nageenyaan ala jiran.
Hin jirani. Namoonni beeku tokko tokko isa Fesbuukii irratti barreesse kan argan ''Dhuguma isuma dubbistee?'' Kan jedhu gaaffii na gaafataniiru.
Kunneen namoota beeku dha. Isaan ala namoonni hin beekne harka wayyaa jalaan na gaafatanii hin beekan.
Maaliif calliste? Waa'een kee baay'ee haasawamaa ture. Maaliif callifte?
Intarneetiin gaafa Sambataa adda cite. Kanaafuu, Sambata, Dilbata, Wiixata, Kibxata hanga Roobii intarneetiin hin turre.
Jira jedhee dubbachuuf tajaajila intarneetii argachuu hin dandeenye.
Wanta sana [waa'ee ishee waan odeeffamu] kanin dhagahe namoonni biyya alaatii yeroo bilbilan ture. Jira jechuufis intarneetin waan hin turref deebisuu hin dandeenye.
Miidiyaalerraa bilbilame kan na argatan turan. Akkuma intarneetiin dhufen akka hin hidhamne barreesseera.
Sagaleen waraabame akka gadhiifamu fedhii qabdaa?
Amma osoo bahu baate nan filadha. Sababni isaa, waan xumura argate miti. Waan qorannoorra jirudha. Kanaaf, kana gidduutti bahuun isaa sirriidha jedhee hin yaadu.
Wanta mudate booda jireenya kee irratti ykn maatiin kee jeeqamani turanii?
Homaa. Eenyuyyuu nagaafate waan hin beekneef homtuu hin jiru. Namoonni tokko tokko balaa qaba naan jedhu.
Takka hidhamte, yeroo kaan ajjeefamte oduun jedhu yeroo odeeffamu jalqabarratti maatiin dhiphatani turan. Hanga bilbilani sagaleekoo dhagahanitti dhugaa itti fakkaata ture.
Gaafa Roobii booda garuu wantoonni hunduu waan tasgabbaa'aan natti fakkaate.
Ati garuu wanta ta'e hunda deebite yeroo ilaaltu maal ta'a osoo bilbiluu baadhe yaadni jedhu sitti dhufaa?
Tasa natti hin uumne. Hojiikoo osoon hojjetaa jiru tasa kanin bilbile. Wanti addaa wanti godhe hin jiru.
Humnoonni nageenyaa mootummaa hanga yoonaa sibira dhufuun yaadakee fudhachuu dhabuun isaanii si dhibaa?
Lakki. Nan dhibu.
Gaazexessituudha. Gaazexeessaan wantoota [mudatan] gaafata, qulqulleessa. Anis wanti godhe kanuma.
Yeroo sanatti kanin bilbile odeeffannoo fudhachuufi. Odeeffannoos fudhadheera. Wantan argadhe barreesseera.
Kana gochuun na gaafachiisa jedhee hin yaadu. Yaaddos natti hin uumne.
Miidiyaa hawaasummaa irratti waa'ee isaaniin walqabatee waan barreeffamu ni hordoftaa?
Wanta kana qulqulleessuuf sagalee harkakeerra jiru gadhiisuuf yeroon hin geenye jettee akka yaaddu wanti si taasise maali?
Tokkoffaa qulqulleessuun itti gaafatamummaa kooti jedhee hin yaadu. Kutaan kana irratti itti gaafatamummaa qabu jira. Dabalataan, wanti xumurame waan jiru natti hin fakkaatu.
Qorannoorra waan jiruf akkasidha akkasidha jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Itti gaafatamummaa seeraa kan qabu natti fakkaata.
Sochii Biyyaalessaa Amaaraa: Ajjeechaa aangawoota malee, fonqolcha mootummaa miti